တံခါး Damper လျှော
ကြိုးကွင်းတံခါးကိုထိပ်တန်းလျှော 80KG စက်ရုံစျေးနှုန်းပရိဘောဂ ...
ချိန်ညှိမြင်နိုင်ဆွဲယူတံခါးကို Track ကြိတ်စက်ဗီရို ...
လူမီနီယမ် Angle မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်များအတွက်တရုတ်ကိုယ်ရေး
ပရိဘောဂကက်ဘိနက်တံခါးကို roller လျှော
အစိုင်အခဲ Wood ကတံခါးမကြီးပုံစံများအတွက်တံခါးဟာ့ဒ်ဝဲဆွဲယူ ...
Kure ဖျပိတ်မီးဖိုချောင်တံခါး Damper ဆွဲယူ
တံခါးကို roller လျှော Kure တံခါးကိုဘီးနိုင်လွန်
FOB စျေး: US $0.5 - 9,999 / Set
Min.Order အရေအတွက်: 100 Set/Sets
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 10000 Set/Sets per Month
ဆိပ်ကမ်း: Guangzhou, shanghai and any port in China
grade: 6000 စီးရီး
လျှောက်လွှာ: တံခါး & Window
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: Silver, Anodized
ပစ္စည်း: Anodized လူမီနီယမ် Extrusion
အမျိုးအစား: OEM လူမီနီယမ် Extrusions Profiles
မျက်နှာပြင်: White က Anodized
M981D TM012 TM327 လြှောကျလှာ
M939 M921 M906 လြှောကျလှာ
DW018A DW1001 DW03D လြှောကျလှာ
F611D F654S F658BS လြှောကျလှာ
MD909 MD910 MD914 လြှောကျလှာ
item အမည် မီးဖိုချောင်ဗီရိုများအတွက်လူမီနီယံမီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်ဘောင် / လူမီနီယံကက်ဘိနက်တံခါးကို frames များကို / လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်း
ပစ္စည်းအဆင့် အလွိုင်း 6000 စီးရီး
နည်းပညာ လူမီနီယမ် Extrusion
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ကြိတ် finish ကို, anodizing, အမှုန့် coated, sandblasting, electrophoresis စသည်တို့ကို
အရောင် ငွေရောင်အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, ရွှေ, ရှမ်ပိန်, မှောင်မိုက်ကြေးဝါသို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ
ပုံမှန် Anodizing ထူ 8-12 မိုက်ခရို
ပုံမှန်ပါဝါ Coating ထူ 60-100 မိုက်ခရို
ပုံသဏ္ဌာန် ရင်ပြင်, က Round, Flat, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည် '' ရေးဆွဲသည်နှင့်အညီ
အရှည် ပို့ကုန်များ၏နျ Standard အရှည် 5.8m ဖြစ်ပါသည် စက် 1 ပြီးအောင်အများစုမှာ Anodizing 6.5 မီတာ3အရှိဆုံးမှာမီတာ
နက်ရှိုင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့ Bende စသည်တို့ဖြတ်တောက်ခြင်း, တူးဖော်ခြင်း, လာကြတယ်,
2D & 3D ဒီဇိုင်း 1:4ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဒီဇိုင်းနဲ့
2: Auto CAD, 3D, AI အ, SLD, PRT ။ IGS, PDF, JPEG, စသည်တို့ကို
အင်ဂျင်နီယာ & လက်ဆောင် 1: 8 မှိုဆိုင်အတွက်အင်ဂျင်နီယာများ။
2: စသည်တို့ကိုအသုံးပြုမှုမြင့်မားတဲ့အရွယ်အစားတန်ချိန် extruder, ကြေးနန်း EDM, CNC, Drilling စက်တွေ
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး 1.ISO Approved ။
ဆိုက်ကိုမှာ 2.Inspection ။
သင်္ဘောခင်မှာ 3.Inspection ။
စက် 4.Testing ။
အသေးစိတ်ကိုထုပ်ပိုး ပြင်ပမှာတစ်ခုချင်းစီကိုပရိုဖိုင်းကိုသီးခြားထို့နောက်ယာဉ်စက္ကူအဘို့အအတွင်းပိုင်း 1.EP စက္ကူ တစ်ဦးချင်းစီပရိုဖိုင်းကိုသီးခြားထို့နောက်စက္ဏူထူစက္ကူအဘို့အအတွင်းပိုင်း 2.EP စက္ကူထို့နောက် pallet
ပို့ခြင်း ငွေပေးချေမှုဆင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15-25days
03.Reverse တံခါးကို fittings
05.Furniture & ဝန်ကြီးအဖွဲ့လက်ကိုင်
10.Room တံခါးကို fittings
အွန်လိုင်းအမိန့်ချထားပါနှင့်အပြည့်အဝကာကွယ်မှုရရန်သတ်မှတ်ထားသောဘဏ်အကောင့်မှပေးဆောင်။ 100% ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကို 100% On-အချိန်တင်ပို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး သင့်ရဲ့ဖုံးလွှမ်းငွေပမာဏများအတွက် 100% ငွေပေးချေမှုကာကွယ်မှု
အသေးစိတ်ခြေလှမ်းများများအတွက် link ကို click နှိပ်ပြီး: ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်အမိန့်ချထားရန်ကဘယ်လို ?
ယခင်: လူမီနီယမ်ကိုယ်ရေးဖိုင် Extrusion ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ
-Doo ဆှဲဆွဲယူလူမီနီယမ်ပရိဘောဂဟာ့ဒ်ဝဲ ...
SL အဘို့အလူမီနီယမ်တံခါး Extruded ကိုယ်ရေးဖိုင်အသုံးအဆောင် ...
လူမီနီယမ်ကိုယ်ရေးဖိုင်ကုန်ပစ္စည်းများစံအရွယ်အစား Manufa ...
ဝန်ကြီးအဖွဲ့ D ကိုဆွဲယူဘို့တရုတ်ခုနှစ်တွင်လူမီနီယမ် Profile ကို ...
လူမီနီယမ်ကိုယ်ရေးဖိုင် Extrusion ဆက်စပ်ပစ္စည်း Manufact ...
ရှန်ဟိုင်း Kure ဟာ့ဒ်ဝဲ Co. , Ltd
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-51515228
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-51515226
E-mail ကို: info@slidingdoorchina.com
E-mail ကို: sales1@slidingdoorchina.com
ဖက်စ်: + 86-21-51761391
ကျွန်တော်တို့ကို Subscribe, နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပရိဘောဂဟာ့ဒ်ဝဲသတင်းသင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်လိမ့်မည်!
© Copyright 2016 ရှန်ဟိုင်း Kure ဟာ့ဒ်ဝဲ Co. , Ltd All Rights Reserved ။
Shelly: မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုမှကြိုဆိုပါ၏!
ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ အခုတော့ chat